Sinikezela ngemisebenzi yethu yokuqesha abasebenzi kwezi ndidi zilandelayo:
Abancedisi boLwazi lweBooth
Abaxhasi boMnyhadala boMdibaniso
Iimodeli zeMidlalo yezeMidlalo
Abaxhasi boMnyhadala beNdlela
Iintlanganiso zokuThuthuka kweMinyhadala
Abasebenzi boBhaliso lweMisitho
Abaxhasi beMisitho yePhulo
Ngeemfuno zakho ngqo, nceda uqhakamshelane nathi nokuba kukwizikolo okanye imicimbi, abasebenzi bayamamela inkampani yakho.
Indawo yokubonisana ehambelanayo nomsebenzi ikubeka ishishini lakho kungekuphela nje eBelgrade, ikwakhona kunye nekhadi lakho lokundwendwela iindwendwe zamanye amazwe. Sithatha umbutho wenkangeleko yakho efanelekileyo hayi ezandleni zakho kodwa siyakuxhasa ngamandla kunye nakwezona nkcukacha zincinci uzalisekisileyo.
Iindwendwe zethu kunye neendwendwe ziqeqeshwa ngokuchanekileyo kwaye zinobuchule obukhethekileyo bePC kunye nolwimi lwangaphandle.
Iqela lethu liyaqinisekisa ukuba ukubonakala kwakho kakuhle kunye neziganeko ziyimpumelelo enkulu.
Nangona kunjalo, asilahlekanga umbono wento eye yasenza saphumelela: Ukoneliseka kwabaThengi njengeyona nto iphambili, ukhathalelo lomntu kunye nokuqinisekiswa komgangatho njengengongoma ephambili.
Unemveliso elungileyo kwaye ufuna ukonyusa ukubonakala kwinqanaba lokuthengisa?
I-AGENCY SNOB ikunceda uyilo, umbutho kunye nokuphunyezwa kokukhuthaza ukuthengisa.
Kuba le mihla ayisathengiswa sodwa, siyaqonda ukuba uKhuthazo lujolise kuko. Abasebenzi bethu bokunyusa kungenxa yesi sizathu esilungiselelwe nguqeqesho lweMveliso yoShishino, uqeqesho lokuthengisa kunye nokuqhubela phambili kwemisebenzi.
Iphulo lokukhuthaza elinempumelelo lonyusa ixabiso lokuvunywa kwenkampani yakho kunye neemveliso zakho. Unokuba ngabathengi kuhlobo lwedilesi yobuqu, iidilesi ezintsha, kwaye uzuze ukuphathwa kufanelekile.
Ukuqaliswa ngempumelelo kwemveliso yakho kuxhaswe ngokufanelekileyo kukukhuthaza okutsha kwaye kukuqinisekisa ngokwenyusa kwenqanaba lokwazisa.
Kwiminyaka engaphezu kwesixhenxe kweli shishini, sifunde ukuba imfihlo yempumelelo yomnyhadala liqela leendwendwe kunye nobungcali abanobuchule, ababesebenza ngokusebenzisana, kunye nalapho ukunceda umthengi ngokuba kwinkonzo yeendwendwe zabo ngeendlela zonke. Singatsho ngekratshi ukuba sizibonile zonke iimfuno zomamkeli / umninimzi kule ntengiso ikhulayo.
Iinkonzo zethu ezithandwayo:
Iminyhadala esesikweni kunye neminyhadala
Singoochwephesha ekuphatheni iminyhadala esesikweni: kukarhulumente nabathengi abanamashishini, sinesibambiso kunye neendwendwe ezikhethekileyo kwiminyhadala esesikweni. Ukongeza kwinkcazo-ntetho entle kunye nokuziphatha okufanelekileyo kumsitho, sigxininisa kakhulu kwiimfuno ezizodwa zomsitho ekuthethwa kuwo kunye nemithetho yawo yezokhuseleko.
Kwinkomfa yemithombo yeendaba kunye nemisitho yeendaba, abalingane bethu bayakwamkela abathathi-nxaxheba abafikayo, ngokukhawuleza nangokuzimela baphathe ubhaliso lwabameli beendaba, kwaye bancede nokusetyenziswa kombhobho kuwo wonke umcimbi.
Nokuba yinkomfa yosuku olunye okanye yosuku oluhlukeneyo, oogxa bethu baya kuba bekho kulo lonke, ukususela kumalungiselelo de kube sekupheleni komsitho, kwaye bakulungele ukuncedisa nakwezinye iingxaki ezinokuvela.
Imiboniso yasekhaya nakwamanye amazwe kunye neMiboniso
Singatsho ngokuzithemba ukuba iqela lethu libamba owayo nawuphi na umcimbi, nokuba ukwelaseHungary okanye phesheya. Sibhalisa kwaye samkele iindwendwe, sincede kumagumbi eencwadi kwiihotele, sinike ulwazi malunga neshedyuli yomsitho, sisasaze izixhobo zokutolika-ngelizwi, senza konke ukwanelisa zombini iindwendwe nabaququzeleli.
INYANISO YELizwe LOKUGQIBELA
INDLELA YOKUFUNDA I-HORECA
UKUHLAZIYELWA KWAMAZWE NGAMAZWE NGAMAZWE EMFUYO KUZO ZONKE IZITHULEKILEYO - IBHALABARI YECACIB
I-Nautic YASEKHAYA, UKUNYANGWA NOKUFAKA IXESHA
UMBONO WEZITHUTHA (OICA)
INDAWO YOKUZIPHATHA KWAMAZWE NGAMAZWE
UMGAQO-NKQUBO WAMAZWE NGAMAZWE-EBONAKALAYO
UKUHLAZIYELWA KWAMAZWE NGAMAZWE kunye NOKWENZA IXESHE LOKUGCINWA, I-HAIRCARE, I-AIRHETICS NEMPILO
UKWAKHIWA KWELIFA LEMFAZWE LELizwe
IQINISO LAMAZWE NGAMAZWE LOKUFUNDA NOKUFUNDA NGOKUFANELEKILEYO (UFI)
IXABISO LOKUGQIBELA LOKUQWALASELA IBELGRADE
IPHAKATHI ye-PackTECH EXPO BALKAN
UMGAQO-NKQUBO WAMAZWE NGAMAZWE, IPHEPHA KUNYE NENKCAZO YOKUKHUSELEKILEYO YOKUGQIBELA - GRAFIMA
I-FAIR YELIFA LOKUFUNDA NOKUFUNDISA I-BIROEXPO
UCWANGCISO LWEZOBUGCISA BONXIBELELWANO NOKUGQIBELA
INKCAZO YAMAZWE NGAMAZWE YAMAZWE
UKHUSELEKO LWEZOKHUSELEKILEYO LWEZOQOQOSHO NOKUFUNDA NOKUFANELEKILEYO KWEZOBUCHULE - ECOFAIR
INYANISO YAMAZWE NGAMAZWE YOKUFUNDA
INYANISO YENCWADANA YENCWELONKE YELIFA LELizwe
INYANISO YEMIQINISEKISO YEMFUNDO YAMANYE NOKUFUNDA
I-BIR FAIR-I-FAIR YEMFUNO
INYANISO YOLWAZI, UNXIBELELWANO NOKUMAKISHWA
ISIQINISEKISO SEZELizwe SOKUGQIBELA, UKUFUNDA NOKUFUNDA
UKUHLAZIYELWA KWEMATINESI, IZIBHENO NEZIBONELELO ZOKWENZA IMveliso KWISITHUBA SOKUJONGA
INYANISO YOKUTYA KUNYE NOKUGQIBELA